Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Chivabvu 12, 2021
Nyaya yekuti matare edzimhosva amanikidze mukuru wematare edzimhosva, VaLuke Malaba, kuenda pamudyangigere musi wa 15 Chivabvu pavanosvika makore makumi manomwe, yonzwikwa nemusi weChishanu.
Bato reNational Consitutional Assembly rinoti Zanu PF inofanirwa kurangwa nokuti iri kuenderera mberi nekushandura bumbiro remitemo yenyika panguva iyo veruzhinji vari kupikisa kushandurwa kwaro.
Dare redzimhosva rinomisa nyaya yekutongwa kwemadzimai matatu eMDC Alliance anoti Muzvare Joana Mamombe, Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marova, richiti dare rinofanirwa kutanga rapedza nyaya yevatatu ava avo vasiri kuda kutongwa naAmai Bianca Makwande nemuchuchisi, VaMichael Reza nezvikonzera zvavakasvitsa mudare.
Studio7 inoita hurukuro nenhengo yeMDC Alliance, VaLegwani Mavhunga, avo vakadirwa muchetura kumeso nevanofungidzirwa kuti vasori panguva iyo vaive mumaoko emapurisa paHarare Central Police Station.
Vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro uye vanhu vatatu vakafa nechirwere ichi nezuro wakare, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mana nemakumi mana nevasere, 38 448, uye vafa nechirwere ichi vahisvika pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe, 1 579.
Nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe, VaTafadzwa Chikoto vakaberekerwa kuUzumba, avo vakasarudzwa kuve kanzura weThrapston mudhorobha reCorby kuUnited Kingdom. VaChikoto vakakwikwidza vachimirira bato reLabour Party.